China Steamed Foods Vacuum Cooler ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | ALLCOLD
နည်းပညာသည်ဖိအားလျော့နည်းသွားသည်နှင့်အမျှရေသည်နိမ့်သောအပူချိန်တွင်စတင်ပွက်ပွက်ဆူနေသောဖြစ်ရပ်အပေါ်အခြေခံသည်။ လေဟာနယ်အအေးတွင်ဖိအားသည်ရေကိုစုပ်ယူသောအဆင့်သို့လျှော့ချသည်။ ဆူပွက်နေသောလုပ်ငန်းသည်အစားအစာမှအပူကိုဖယ်ထုတ်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ လေဟာနယ်အခန်းရှိဖိအားကိုလျှော့ချ။ အစားအစာကိုအအေးခံနိုင်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများသည်အပူချိန်မြင့်မှ ၂၀ မှ ၃၀ မိနစ်အတွင်း ၁၀ about ခန့်မှအအေးခံနိုင်သည်။ မုန့်ဖုတ်ထားသောအစားအစာများသည်အပူချိန်မြင့်မှ ၂၀ ℃မှ ၁၀ မှ ၂၀ မိနစ်အတွင်းသင့်လျော်သောထုပ်ပိုးနိုင်သည်အထိအအေးခံနိုင်သည်။
1.Fast အရှိန်မြန်နှုန်း။ ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများသည် ၁၀ မှအအေးခံနိုင်သည်။ ၂၀-၃၀ သာလိုအပ်သည်၊ မီးဖုတ်ထားသောအစားအစာများသည် ၂၀ မှ ၂၀ အတွင်းအအေးခံနိုင်သည်။
2. ယူနစ်ယူနီဖောင်း။ လေဟာနယ်အခြေအနေအောက်မှာအစားအစာ core ကိုကနေမျက်နှာပြင်မှအအေး။
စားနပ်ရိက္ခာရေဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်အဆင့်နှစ်ဆင့်အေးစေသော။ မြင့်မားသောအပူချိန်မှ ၆၀ to သို့ရောက်သောအခါဘက်တီးရီးယားများမြန်ဆန်သောကြီးထွားမှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အစာသည်လျင်မြန်စွာအအေးခံလိမ့်မည်။ ဒုတိယသိုလှောင်မှုသည်အငွေ့ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်အစာအရသာတိုးတက်စေရန်နှေးကွေးစေသည်။
4. သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစက်၊ သင့်လျော်သောအစားအစာသန့်ရှင်းမှုစံနှင့်စက်သည်လှပသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။
လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်အတွက် ၅.High ထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။ နှစ်ဆင့်အဆင့်အအေးနှင့်အထူးသဖြင့်ရေလက်စွပ်စုပ်စက်။ ခလုတ်တစ်ခုလည်ပတ်မှုနှင့်အရန်စနစ်ပြtroublနာဖြေရှင်းခြင်း။
Vacuum Cooler အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ
၁။ ဖုန်စုပ်စက် - သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သောသင်၏အစားအစာကိုထမ်းရန်။
၂။ Vacuum system - လေထုကိုလေဟာနယ်အခန်းထဲကနေထုတ်ယူပြီးတဲ့နောက်အစားအစာကိုအေးအောင်ထားပါ။
၃။ ရေခဲသေတ္တာစနစ် - ဤအခန်းထဲရှိရေငွေ့များကိုဖမ်းရန်စဉ်ဆက်မပြတ်အအေးပေးသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုသေချာစေရန်။
4. Controll system --- Vacuum cooler ၏အခြေအနေကိုပြသရန်နှင့်ပြသရန်။
1. ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာ - ချက်ပြုတ်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ မှို၊ အသား၊ ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ငါး၊
၂။ မုန့်ဖုတ်ထားသောအစားအစာ - မွန်းကိတ်၊ ကိတ်မုန့်၊
3.Fried အစားအစာ: ဆန်ကြော်, ဘောလုံးကြော်, နွေ ဦး လိပ်စသည်တို့။
4. စတီးအစားအစာ: ရေနွေးငွေ့ဆန်, ခေါက်ဆွဲ, ဖက်ထုပ်, ဆူရှီ, ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး, ရေနွေးငွေ့ Bun စသည်တို့
1.Condensor Options ကို: တစ်။ လေအေးပေးစက် b.Water cooling condensor
2.Door ရွေးချယ်စရာများ: က။ စံလွှဲတံခါး b.Horizontal လျှောတံခါး
စိတ်ကြိုက် 3.Machine ယူနစ်: တစ်။ ပေါင်းစပ်စက် b.Divided ခန္ဓာကိုယ်စက်
4. ရေခဲသေတ္တာ Options ကို: a.R404a b.R407c
ရှေ့သို့ Bakery လေဟာနယ်အေး
Allcold Zone, Xiajie, Qishi Town, Dongguan, Guangdong Province, China